Naga soo wac: +86 185 7557 3399
LED Corn Siraaj
LED Taxanaha iftiin Garage
LED IP64 Taxanaha iftiin hadhuudh
LED Xirasho Light
Qalabka Retrofit LED
LED High ay daqal Siraaj
LED toosan Panel Light
LED toosan Kit Retrofit magnetic
Shenzhen Youlumi Co.LTD takhasusay saarka LED waxyaabaha iftiinka. Waxaan ku faani a R & D kooxda xirfadeed iyo waayo-aragnimada, ka go'an in ay ka gudbaan caqabadaha horumarka, wax soo saarka iyo qaybinta wejiyada soo saarka iftiiminta. Xubnaha kooxda dhiiri Youlumi riixay horumarinta shirkadda ee technology LED. Dejinta bartilmaameed u ah tartanka in industry ee.
La aasaasay bishii July 2012, waxaan ka go'an in ay soo saara LED guluubka iyo Nuur hadhuudh alaabta. In 2013, waxaan si guul ah ayaa laga nalalka hadhuudh our cusub 150W iyo 200W oo ay ku qoran darawal ah oo gundhig. kala duwan Our alaabta si joogto ah u fidiya oo hadda ka kooban 250W, 300W iwm lagu daydo.
Hadda, fudud hadhuudh 250W flagship dhammaataan baddelo 400W iyo 1000W qariyey il light. In 2014, xirmooyinka qalabyada Our in 80W, 100W iwm waxyaabaha Lahjadaha la dhigay suuqa. Our bay oo wadada nalalka sare heshay qiimayn wanaagsan macaamiisha badan ee.
Codsiga waxaa aasaasiga ah ee alaabta waa in bakhaarada, suuqyada, goobaha ganacsiga iyo goobaha dibadda kala duwan. Waxyaabahani baxay sameeyaa beddeli ee suuqyada Yurub iyo Maraykanka. products waa awood in uu bedelay dhammaan ilaha iftiin huriye oo ay ku jiraan CFL, HPS, LED UV Daaweynta Systems iyo fijaan Birta Halide si ay u haysta in la yareeyo isticmaalka awooda. Hadafkayagu aasaasiga ah waa in ay caawiyaan dadka macaamiisha noo ah in hoos qiimaha korontada iyo gaaro xaaladda ah enviromentally saaxiibtinimo.
Our kudhegga shirkadda, suuq-dhisan, oo diiradda saaraya marka laga reebo wax soo saarka alaabta tartan. Waxaan run ahaantii rajo horumarinta is faa'iido iyo iskaashiga.
Floor3, C Dhismaha Chuangfu Industrial Zone, AiQun Road, Shiyan Town, Bao'an, Shenzhen, Shiinaha